नेपालीहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै उच्चस्तरीय समितिले गर्यो यस्तो निर्णय, अब के गर्ला ओली सरकार ? — Imandarmedia.com
नेपालीहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै उच्चस्तरीय समितिले गर्यो यस्तो निर्णय, अब के गर्ला ओली सरकार ?
काठमाडौँ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तत्कालै लकडाउन खुकुलो बनाउने परिस्थिति नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमण देखिएको, सबै क्षेत्रमा परीक्षण भइनसकेकाले देश कोरोना संक्रमणको खतराबाट मुक्त नभएको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।